Akuselona leli kheli – kusuka ekubeni iDavenport Road kwaba iHelen Joseph Road – The Ulwazi Programme
Ngomhlaka 9 Agasti 1956 izinkulungwane zabesifazane bazo zonke izinhlanga bamasha baya e-Union Buildings ePitoli. Inhloso yabo kwakuwukuhambisa uhlu lwezikhalazo kuNdunankulu wangaleso sikhathi, u J.G. Strijdom, ukuphikisana nemithetho yamapasi owawuthi abantu abamnyama base-Afrika ukuthi baphathe uhla lwamadokhumenti, okufaka phakathi isithombe, amarekhodi okuqashwa, ukukhokhwa kwentela kanye namarekhodi obugebengu, okwenza uhulumeni akwazi ukuqhubeka nokuvimba ukuhamba kwabantu abangebona abamhlophe. Bekungekho emthethweni ukungabi ‘nepasi’, inhlawulo yalokho kwakungukuboshwa nokuvalelwa ejele.
UHelen Joseph Road eThekwini (phambilini wawunguDavenport Road) ubizwa ngomunye wabantu besifazane ababa nesandla ekuhleleni imashi eyaba ingqophamlando ngo-1956, lapho kwabikwa khona ukuthi abesifazane abayizinkulungwane ezingamashumi amabili babemi bethule isigamu sehora eligcwele ezitebhisini ze-Union Buildings, ngaphambi kokushiya ngengoma ethi ‘Nkosi sikeleli Afrika’. UJoseph, owazalelwa e-UK futhi owathuthela eNingizimu Afrika eneminyaka engu-26 ubudala, okwenzeka wazithola esencwadini yamaphoyisa. Owayesebenza ekwakheni i-Federation of South African Women, uHelen Joseph wayengomunye wabamangalelwa kwabangu-156 ecaleni lokuvukela umbuso ngo-1956, elaqhubeka kwaze kwaba ngo-1961, kwathi ngo-1962 waba ngumuntu wokuqala ukuboshelwa endlini ngokomthetho weSabotage Act . Wamiswa ngo-1957, umyalelo wokumiswa wasuswa okwesikhashana ngama-70s lapho uJoseph etholakala enomdlavuza, kodwa wabuyiselwa iminyaka emibili ngo-1980.
UHelen Joseph washone mhla zingu-25 Disemba 1992 eneminyaka engu-87, ngawo lowo nyaka anikezwa ngawo umklomelo ophakeme kakhulu we-ANC, Isitwalandwe / Seaparankoe Medal, ngokuzinikela kwakhe emzabalazweni wenkululeko. Kwakuphinde kwaba usuku olubalulekile kuJoseph, owathi ngasekupheleni kweminyaka yama-1970 wayephethe usuku lukaKhisimusi oluvulekile endlini yakhe. “Labo ababebambe iqhaza emzabalazweni olwa nobandlululo babenesimemo esivulekile sokuvakashela ikhaya lakhe. Onke amaqabane aletha ukudla, kwathi ngo-12 emini wonke umuntu waphamisa ingilazi ukukhumbula labo ababeseRobben Island ……. NgoDisemba 25, 1992, uJoseph ubesesibhedlela kanti indawo yadluliselwa ku-11 Plantation Road, The Gardens. Iziboshwa zaseRobben Island sezikhululiwe, kwathi labo ababekhona baphakamisela uHelen amagilazi abo, owayezoshona ngemuva nje kwalokho. ” (wikipedia.org/wiki/Helen_Joseph)
Izithombe ngezilokotho ze-University of Johannesburg kanye ne-www.jurgenschadeberg.com